ကှနျကရိဖေါငျဒေးရှငျ ၃၃ နာရီ ၁၅ မိနဈ ဆကျတိုကျလောငျးသညျ့စံခြိနျတငျ - Myanmar Builders Guide
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျရှိ One Bangkok ဆောကျလုပျရေးစီမံကိနျး လုပျငနျးခှငျတှငျ အခြိနျ ၃၃ နာရီ ၁၅ မိနဈ ဆကျတိုကျ ကှနျကရိ အောငျမွငျစှာ လောငျးနိုငျခဲ့ပွီး စံခြိနျသဈတဈခု ရရှိစခေဲ့သညျ။
One Bangkok ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျတှငျ လုပျကိုငျခဲ့ကွခွငျး ဖွဈရာ၌ အုနျးမှေးလုံး ထရပျကား ၅၄၇ စီး ပါဝငျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။ ကှနျကရိ စုစုပေါငျး ၂၃ ၇၂၅ ကုဗမီတာ လောငျးခဲ့ကွသညျ။ ရုံးခနျးမြား အဆောကျအဦအတှကျ ဖောငျဒေးရှငျး လောငျးခွငျးဖွဈပွီး အတူလကျတှဲ လုပျကိုငျခဲ့ကွသညျ့ ဖကျစပျလုပျငနျးမြားမှာ TCC Assets and Frasers Property Holdings (Thailand), Concrete Products and Aggregate Co., Ltd. (CPAC), K.C.S. & Associates Co., Ltd., Stonehenge Inter Plc နှငျ့ Italian-Thai Development Corporation Limited တို့ဖွဈသညျ။
ကိုဗဈကူးစကျကာလဖွဈသဖွငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ သနျ့ရှငျးရေး စီမံခကျြမြားကို အထူးဂရုပွု ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။ ကိုဗဈကာလ ဆောကျလုပျရေး လုပျသားမြား အလုပျအကိုငျ ရရှိရေးကို မထိခိုကျစရေနျ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ အခကျြမြား လိုကျနာဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။
အုနျးမှေးလုံးကားမြား လုပျငနျးခှငျမှာ ကှနျကရဈခပြေးပွီးနောကျ ပွနျလညျထှကျခှာသညျ့အခါ ရေးဆေးကွောသညျ့နရောသို့ အရငျသှား၍ ရေးဆေးကွောပွီးမှသာလြှငျ ပွနျလညျထှကျခှာခှငျ့ ပေးသညျ။
ကွန်ကရိဖေါင်ဒေးရှင် ၃၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် ဆက်တိုက်လောင်းသည့်စံချိန်တင်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရှိ One Bangkok ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးမားဆုံးဖြစ်သော Mat Foundation ကို အချိန် ၃၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် ဆက်တိုက် ကွန်ကရိ အောင်မြင်စွာ လောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး စံချိန်သစ်တစ်ခု ရရှိစေခဲ့သည်။
One Bangkok ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ရာ၌ အုန်းမွှေးလုံး ထရပ်ကား ၅၄၇ စီး ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကွန်ကရိ စုစုပေါင်း ၂၃ ၇၂၅ ကုဗမီတာ လောင်းခဲ့ကြသည်။ ရုံးခန်းများ အဆောက်အဦအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်း လောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများမှာ TCC Assets and Frasers Property Holdings (Thailand), Concrete Products and Aggregate Co., Ltd. (CPAC), K.C.S. & Associates Co., Ltd., Stonehenge Inter Plc နှင့် Italian-Thai Development Corporation Limited တို့ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်ကူးစက်ကာလဖြစ်သဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး စီမံချက်များကို အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကိုဗစ်ကာလ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးကို မထိခိုက်စေရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အုန်းမွှေးလုံးကားများ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကွန်ကရစ်ချပေးပြီးနောက် ပြန်လည်ထွက်ခွာသည့်အခါ ရေးဆေးကြောသည့်နေရာသို့ အရင်သွား၍ ရေးဆေးကြောပြီးမှသာလျှင် ပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့် ပေးသည်။